अटेर गर्दा काठमाण्डौको न्यूरोडमा जे भयो !!! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/अटेर गर्दा काठमाण्डौको न्यूरोडमा जे भयो !!!
मीना श्रेष्ठले दुई महिना घर बसाइपछि आज पसल खोल्नुभएको छ । विगत १० वर्षदेखि न्यूरोडमा कप`डाको होलसे`ल पसल स`ञ्चालन गर्दै आउनुभएकी मीनाले दैनिकी सञ्चालन गर्न समस्या भएपछि आज पसल सञ्चालन गर्नुभएको हो । पसल खुला भए पनि उपभोक्ता भने एकजना पनि आएका छैनन् ।
कोरोना महामारीकै बीच सञ्चालन गरिएको पसलमा सामग्री खरिद गर्ने एकजना पनि नआउँदा मीना उदास देखिनुहुन्छ । चौबीसै घण्टा व्यस्त रहने काठमाडौँको मुख्य व्यापारिक केन्द्र न्यूरोडको सडकमा नगन्य मात्रामा मनिसको आवतजावत रहेको छ । त्यस माथि कारो`नाको डर एकातिर आवश्यकबाहेक अन्य कामकाजका लगि मानिस बाहिर निस्केका छैनन् ।
“मानिसको आवतजावत नै कम भएपछि सामग्री खरिद गर्नका लागि मानिस आउने त कुरै भएन, लकडाउनकै कारण कतिलाई त अहिले दैनिकी चलाउन पनि समस्या भएको छ, खानकै लागि समस्या भएपछि लत्ताकपडा किन्न आउने कुरै भएन, यो समस्या लामो समयसम्म रहने हो भने व्यापार गरी खान ठूलो समस्या हुनेछ”, दुःखी हुँदै मीनाले भन्नुभयो ।